नवदुर्गा र नारी शक्तिको महिमा
या देवी सर्वभूतेषू शक्तिरूपेण संस्थिता ।
शक्तिबाट नै सृष्टि हुन्छ र संहार पनि शक्तिबाट नै हुन्छ । सबै धर्म र सम्प्रदायमा नारीशक्तिको महिमालाई उच्च स्थानमा राखिएको पाइन्छ । अस्तित्वले नै नारीलाई पहिलो कोटीको प्राणीको रूपमा सिर्जना गरेको छ । जन्म, सृष्टि, सिर्जना जे भने पनि त्यो शक्ति नारीलाई प्राप्त छ । वेद, उपनिषद् र गीतामा पनि शक्तिलाई प्रकृति भनिएको छ र त्यसमा नारी शक्तिको महिमा प्रष्ट पारिएको पाइन्छ । जन्म दिने शक्ति नै प्राकृतिक शक्ति हो भनेर वर्णन गरिएको छ । वास्तवमा समस्त ब्रह्माण्डमा सिद्धि र शक्ति व्याप्त छ । स्वयं व्यक्तिभित्र पनि धेरै थरिका शक्ति छन् । तिमध्ये ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति, मनशक्ति, क्रियाशक्ति र ध्यान शक्ति मानिसका वास्तविक शक्ति हुन् ।
हामी कुरा आधा बुझ्छौँ या आफ्नो तरिकाले वर्णन गर्छौं । त्यसैले वास्तविक कुरा, मनन गर्नुपर्ने कुरा र चिन्तन गर्नुपर्ने कुरा सधैँ छुटिरहेको हुन्छ । कतिले प्रचलनलाई धेरैले बुझेर परम्परा पछ्याएका हुन्छन् भने कतिले चल्दै आएको रीति भनेर पछ्याउँदै आएको बताउने गर्छन् । ध्यान शक्ति, चेतना शक्ति र चित्त शक्तिको वास्तविक शक्तिलाई ओझेलमा पारेर दानवहरूको नाश गर्ने दुर्गाशक्तिलाई कथा बनाइएको छ । वास्तविक दानव त हाम्रो मनभित्र रहेका दानवीय प्रवृत्ति, रिपुहरू र दुर्गुणहरू हुन् । भित्रका दुर्गुणहरूको नाश गरी सद्गुणमा जिउने प्रेरणा दुर्गा शक्तिको वास्तविक सन्देश हुनुपर्छ । जसले पनि दानवीय प्रवृत्ति प्रस्तुत गर्छ त्यसको कारण उसमा सद्गुणको अभाव छ ।
नवदुर्गा भनेर पूजिने शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कण्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी र सिद्धिदात्रीको ध्यानमय शक्ति र ऊर्जालाई बुझ्नु जरुरी छ । शैलपुत्री अर्थात् पर्वत राज हिमालय की पुत्री भनेर बुझिन्छ । हिमालय, चेतनाको उच्चस्तर, चेतनाको शिखरको रूपमा बुझ्ने हो भने शैलपुत्रीझैँ जीवनलाई उच्च कोटिमा राखेर बिताउन सकिने प्रेरणा प्राप्त हुन्छ । मन्दिर गएर फूलपाती र भेटी मात्र चढाएर उच्च चेतनाको स्तरलाई जान्न सकिएला ? त्यसमा बोधको कला थपियो भने शैलपुत्री देवीको आराधना गरेको सार्थक हुनेछ । ब्रह्मचारिणी अर्थात् जसले निरन्तर तपस्या र साधना गरेर शिवजीलाई पाएको कथा प्रस्तुत हुन्छ । यसको पनि वास्तविक सन्देश ब्रह्म आचरण, आफ्ना अन्धकाररूपी विचारहरूलाई साधनाद्वारा ब्रह्मरूपी, उच्चतम आचरणमा जीवन जिउन प्रेरणा मिलोस् भन्नु हो । चन्द्रघण्टा अर्थात् जसको निधारमा चन्द्रघण्टा आकारको टीका छ । अलौकिक वस्तुको दर्शन, शक्ति र दिव्य ध्वनिको प्रतीक हुन् चन्द्रघण्टा । दिव्य ध्वनिको श्रवण गर्ने साधनमा पुग्नु र अलौकिक, अदृश्य दिव्यताको पहिचान गरी जीवनमा शान्ति, आनन्द र पूर्णताको अनुभूति गर्नसक्नु पर्छ भन्ने वास्तविक सन्देश हो । ध्यानद्वारा मात्र यो अदृश्य शक्तिको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।
कुष्माण्डा ः अन्धकाररूपी संसारमा ध्यान शक्तिद्वारा ब्रह्माण्ड उत्पन्न गर्ने शक्ति प्राप्त दुर्गा शक्ति जानिन्छ । भित्रको ब्रह्माण्ड जसमा सारा प्राणीलाई तेजोमय, प्रकाशमय, दिव्यतामा उपलब्ध गराउने शक्ति स्वरूपाको रूपमा जानिन्छ । ध्यान साधनाद्वारा अन्धकाररूपी विचार, धारण र कथाबाट मुक्त भएर स्वयंको दिव्य चेतनामा जिउने कला जान्नु यसको मूल सन्देश हुनुपर्छ । स्कण्दमाता ः स्कण्द कुमार कार्तिकेयकी माताको रूपमा परिचित मोक्षको द्वार खोल्ने मातृ शक्ति । बाहिरी कथा व्यथा र विचारद्वारा मुक्त हुन सकेमात्र मोक्ष हुन सकिन्छ । विचारहरूको पछाडि भाग्नु र वास्तविकतासँग परिचित हुन नसक्नु बन्धन हो भने, सत्यको खोज नै मोक्ष हो । सम्भावनालाई वास्तविकतामा बोध गर्नु नै मोक्ष हो त्यसैले प्रत्येक व्यक्ति मुक्त भएर स्वयंको स्वभावमा जिउन सक्छ । कात्यायिनीः महर्षि कात्यायनको तपस्याबाट प्रसन्न भएर महर्षि पुत्रीको रूपमा जन्म पाएकी । घर गृहस्थका लागि आवश्यक साधना, प्रेम र शान्तिको प्रतीक । घरलाई मन्दिर बनाउने र परिवार सुखको एउटा अनुभूति, प्रेमको प्रतीक, प्रेमको महìवलाई बुझ्ने सन्देश । कालरात्रिः अन्धकाररूपी सबै किसिमका सङ्कटलाई नाश गर्ने शक्ति । अन्धकार, अराजक र पापमय कर्मबाट छुटकारा लिई स्वयं भित्रको आनन्दमा जिउने कला बारेको सन्देशलाई बुझ्नुपर्छ । व्यक्तिभित्र रहेको अन्धकाररूपी गुणलाई चिरेर सत्य, चैतन्य, दिव्यतामा छलाङ मार्ने ध्यानको कलामा डुब्नु माता कालीको वास्तविक आराधना हुनेछ । महागौरीः धुलो मैलो लागेको शरीरमा भगवान्को आशिर्वादपछि गोरो र सफा भएको प्रतीकात्मक सन्देश । हाम्रो शरीरभित्र, मनभित्र, विचारभित्र जम्मा भएका धुलो मैलोलाई ध्यान साधनाद्वारा शुद्ध पार्ने सन्देशलाई आत्मसात् गर्न सकेनौँ भने महागौरीको मन्दिर धाएर, बाहिर बाहिर फूल चढाएर मात्र हामीमा रूपान्तरण आउनेवाला छैन । मनभित्र नदेखिने गरी जम्मा भएको धुलोलाई ध्यानको सहायताले शुद्ध पार्न सकिन्छ । सिद्धिदात्रीः समर्पित भक्तलाई सिद्दी, मुक्ति दिने देवी । सिद्धिको वास्तविक अर्थ हो सफलता, पूर्णताको अनुभूति । साधनबाट कहिल्यै पनि सफलता र पूर्णता मिल्दैन त्यसैले साध्य र साधनाको जरुरत पर्छ । पक्कै पनि सिद्धिको लागि समर्पित हुनु जरुरी छ । हामीले खोजेको सिद्धि र मुक्ति विचारको तलबाट मुक्त भएर भावमा डुब्ने सिद्धि हुनुपर्छ । असत्यलाई त्यागी सत्यको मार्गमा हिँड्ने प्रेरणा र सङ्कल्प लिने व्यक्तिले नै वास्तविक सिद्धि प्राप्त गर्छ । साधन, बाहिरका भौतिक सम्पत्ति र सफलता नै जीवनको उद्देश्य र खुसी हो भनेर भागदौड गर्ने व्यक्तिले पूर्णताको अनुभूति गर्न सक्दैन र गरेको उदाहरण पनि छैन । परम चेतनाको स्तरमा पुग्नु, जीवनका क्रियाकलाप र कर्महरूमा साक्षात्कार गर्नु तर परिणामले पूर्णता नदिए पनि त्यसलाई संसारको कर्म हो भनेर बोध गर्नु र पूर्णता त ध्यानबाट मिल्छ भन्ने थाहा पाउनु सिद्धि पाउने प्रमुख उपाय हो ।
नवदुर्गा र दुर्गा शक्तिको वास्तविक पहिचान र प्रेरणा जीवनमा कसरी ग्रहण गर्ने त्यो कला जान्नु वास्तविक आराधना हुन जान्छ । परम्परा र प्रचलनलाई अन्धाधुन्ध अँगाल्दै जाने तर आफ्नो जीवनमा रूपान्तरण आएन भने त्यो परम्परामै सीमित हुन पुग्छ । क्षमा, सहनशीलता, धैर्यता, सिर्जनशीलता र ममतामयी नारी शक्तिलाई पुरुषले पनि आफ्नो जीवनमा अपनाउँदा जीवन धन्य हुन्छ भन्ने वास्तविक सन्देश नवदुर्गाको आराधना र शक्तिपीठको दर्शनले दिन खोजेको हो । मानिसका असल र सत्य गुणलाई नारी र पुरुष भनेर विभाजित गर्न सकिँदैन त्यसैले त नवदुर्गाभरि पुरुषहरू पनि नवदुर्गाको आराधना गर्छन् र शक्तिपीठ धाउँछन् । जसरी मन्दिर गएर मूर्तिको रूपमा स्थापित अचेत देवीको पूजा आराधना गरिन्छ त्यसैगरी घरका महिलालाई पनि सम्मान र प्रेम दिन सक्नुपर्छ भन्ने गहिरो र मार्मिक सन्देशलाई भुल्नु हुँदैन । एउटा घर र परिवारलाई सुख, शान्ति, आनन्द र प्रेमपूर्ण राख्न प्रत्येक घरका नारीहरूको अमूल्य योगदान रहेको हुन्छ । दिदीबहिनी, आमा, भाउजू, श्रीमती, छोरी, सासू, चेलीबेटी सबैलाई सम्मान र प्रेम दिन नजान्नेले नवदुर्गामा मन्दिर मात्र धाएर आफ्नो जीवनमा कुनै रूपान्तरण महसुस गर्दैन । किम्बदन्तीमा उल्लेख भएका देवीले दानवहरूको टाउको छिनेको उदाहरण मानिसलाई बुझाउन चित्रमा प्रस्तुत गरिएका हुन् । कुनै देवी शक्तिले कसैको प्राण लिएर आफूले विजय प्राप्त गरेको आधिकारिक उदाहरण सायदै होलान् । असत्यमाथि सत्यको विजय प्राण हत्याले हुँदैन । असत्य, हिंसा, कुकर्मबाट सुमार्गमा ल्याउने उपाय प्रेम, साधना र सकारात्मकता हो । मनका विकार त्यागी, आफूभित्र भएको पशुत्वको बलिदान गरी प्रेमपूर्ण र करुणावान बन्ने सन्देश माता दुर्गाको हो । मानिस भएर पनि पशुत्वको गुण ग्रहण गर्ने, त्यसको बदलामा निरीह पशुलाई बल दिने प्रथा कदापी राम्रो होइन । देवीको नाममा बलि दिने प्रथा पण्डितयाइ तरिकाले प्रचलनमा आएको हो । धर्मको नाममा बलि दिने प्रथा कुनै शास्त्र र धर्ममा उल्लेख पाइँदैन । निरीह प्राणीको प्राण लिनु धर्म हो भने पापको उदाहरण के होला त ? धर्मको नाममा हिंसा रहदासम्म शान्ति प्राप्त गर्नु मुर्खता सिवाय केही हुँदैन । परोपकाराय पुण्याय, पापाय पर पिडनमको अर्थ र सन्देशलाई आत्मसात् गर्दै असहाय र निरीह प्राणीलाई मद्दत गरौँ, हिंसा नगरौँ ।